रहिमको सजायपछि सन्तहरूको बचाउ गर्दै के भने रामदेवले? :: Setopati
रहिमको सजायपछि सन्तहरूको बचाउ गर्दै के भने रामदेवले?
सेतोपाटी भारत, भदौ १३
स्वघोषित गुरु गुर्मित राम रहिम सिंहलाई भारतीय अदालतले बलात्कार दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ।
दुई महिलालाई बलात्कारको दोषी ठहर्‍याइएका उनलाई १०/१० वर्ष जेल सजायसहित १५/१५ लाख भारु जरिवाना तोकिएका हो।
‘रक स्टार बाबा’ नामले चिनिने रहिमबारे अहिले भारतका बाबा रामदेवले सोमबारै बयान दिएका थिए। कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै रामदेवले आफूमाथि पनि धेरै मुद्दा परेको भए पनि रहिमका समर्थकले जस्तो आफ्नाले नमच्चाएको बताएका थिए।
रहिमको सजाय तोकिएपछि रामदेवले फेरि अर्को बयान दिएका भारतीय समाचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। संत समुदायमा आयोजित एक बहस कार्यक्रममा उनले देशमा धर्मसत्ताका साथै राजसत्ताको पनि शुद्धीकरण आवश्यक भएको बताएका समाचारमाध्यमले जनाएका छन्।
'पछिल्ला केही वर्षमा धर्म र राजसत्तामा कलंक लागेको छ। यसका लागि शुद्धीकरण अत्यावश्यक छ,' उनले भनेका छन्।
सबै धर्मसत्ताले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भन्दै रामदेवले सन्त समुदायको भने बचाउ गरेका भारतीय समाचारमाध्यममा उल्लेख छ।
'सन्तहरूको कुनै खास समूहलाई निशाना बनाउनु हुँदैन। देशमा आज पनि लाखौं यस्ता सन्त छन् जो सत्य, चरित्रवान र पवित्र छन् र, मानिसहरूको सेवा गरिरहेका छन्' उनले भनेका छन्। पछिल्ला तीन/चार वर्षमा देखिएका यस्ता विभिन्न मुद्दाका कारण सबैलाई सोही नजरले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले भनेका छन्, 'साधू वा सन्तको भेषमा कसैले गल्ती गर्छ भने त्यही कुरालाई लिएर सबै सन्त समुदाय र परम्परालाई अपराधी मान्न हुँदैन।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १३, २०७४, ०४:०४:०४